भोट खसाल्न आएकालाई इँटाभट्टामा जलाए – Khabar Silo
भोट खसाल्न आएकालाई इँटाभट्टामा जलाए
गौर : कांग्रेस नेता मोहम्मद आफ्ताव आलम हत्या आरोपमा पक्राउ परेपछि घटनाका तथ्य एकपछि अर्को गर्दै बाहिरन थालेका छन्। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावको अघिल्लो रात चैत २७ गते नेता आलमले पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको पुरानो घरमा बम विस्फोट गराएको आरोप छ। चुनावमा धाँधलीका लागि गराइएको विस्फोटमा तत्कालीन सरुअठा गाबिस २ का २४ वर्षीय पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र अर्का २२ वर्र्षका ओसी अख्तर मारिएका थिए।
भारतमा अध्ययन गर्दै आएका रौतहटका दुई युवक बम बिस्फोटनमा परेर घाइते भएका थिए। उनीहरुलाई पछि इँटाभट्टामा खसाली जनाएर मारिएको पीडित परिवारको भनाइ छ। इँटाभट्टामा खसालेर मारिएका भनिएका त्रिलोकप्रताप सिंह भारतमा स्नातक पढ्दै थिए। पहिलो संविधानसभाको चुनावमा भोट खसाल्न बिदा लिएर आएका थिए। अर्का युवक ओसी अख्तर पनि दुबईबाट दुई महिनाको विदा लिएर चुनावका लागि घर आएका थिए।
घटना भएको साँझ राजपुर पुगेका मृतक ओसी अख्तरका ससुरा मोहमद सम्सुलले ज्वाइँलाई जीउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको दाबी गर्दै आएका छन्। रौतहटका तत्कालीन एसपी पनि घटना लुकाउन मिलेको सम्सुलको आरोप छ। ‘त्यस बेला बोल्ने आँट भएन। मोहम्मद आफ्ताव आलमविरुद्ध बोल्दा मारिने खतरा थियो’, उनले भने, ‘आलम त्यसबेला रौतहटको टाइगरै थिए। कसले आवाज उठाउने? प्रहरी प्रशासन, कानुन उसैको पक्षमा थियो।’
मारिएका ओसी अख्तर वैदेशिक रोजगारका क्रममा डेढबर्ष दुवई बसेर बिदामा आएका थिए। तीन बर्षको छोरा थियो। केही महिनापछि उनी दुवइ फर्कने सोचमा थिए। गाउँका चिनजानका मानिस पनि चुनाव प्रचारमा थिए। साथीहरुकै कारण चुनाव प्रचारका क्रममा उनी पनि आफ्ताव आलमको गाउँ पुगे। उनलाई २६ गते दिउँसो चुनाव प्रचार गर्न जाउँ भन्दै नेता आलमका मानिसले लगेका थिए। ओसीका श्रीमती अमना खातुनका अनुसार त्यसपछि श्रीमान् फर्किएनन्। श्रीमान् मारिएको १२ बर्ष भइसकेको छ। घटनाका मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता आलम पक्राउ परेका छन्। आरोपी आलप पक्राउ परेपछि पीडितलाई बल्ल न्याय पाउने आश पलाएको छ।
जिउँदै जलाइएको भनिएका त्रिलोकप्रताप सिंहको परिवारले पनि न्याय पाउने आशा पलाएको बताएका छन्। त्रिलोकका ७९ बर्षीय बावु श्रीनारायण सिंह न्यायको लागी १२ बर्षदेखी भौतारी रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०६९ सालमै दोषीमाथी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाइ निर्देशन दिएको थियो। त्यसको ८ बर्षपछि बल्ल मुख्य आरोपी मो. आफ्ताव आलम पक्राउ परेका हुन्। घटना सम्झदै उनको बुवा श्रीनारायण भन्छन, ‘भोट खसाल्न आएको थियो। उसैलाई जीउदै चिम्नीभट्टामा खसाले। घटनाको धेरै वर्षसम्म आफै मारिने डरले बोल्न सकिएन।’
छोराको हत्या भएको भन्दै जाहेरी दिने अख्तरका आमा रुक्सना खातुनको २०६७ सालमा हत्या भएको थियो। बम बिस्फोटमा घाइते भइ भारतमा उपचार गराएको भनिएका एकव्यक्ति संग प्रहरीले सोधपुछ गरीरहेको छ। रौतहटकै राजपुर फरदवाका घटनाका प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि प्रहरीले बयान लिएको छ।
‘जापानको शक्तिशाली आँधीमा नेपालीहरु सुरक्षित’
२५ असोज, काठमाडौं । जापानमा आएको शक्तिशाली आँधीबाट नेपालीहरु हताहत नभएको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । टोकियोस्थित नेपाली दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसनका प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालले जापानको समयअनुसार शनिबार राति ११ बजेसम्म सबै नेपाली सुरक्षित रहेको जानकारी आएको बताए । ‘हामी नेपाली समुदायसँग सम्पर्कमै छौं,’ अनलाइनखबरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा अर्यालले भने, ‘यहाँको राति ११ बजेसम्म […]
ऋण लिनेहरू होसियार !
काठमाडौं। कसैको राम्रो जमिन र घर यिनलाई देख्नै हुन्न, ऋण दिने प्रस्ताव लिएर घरमै पुग्छन् र, ऋण नलिएसम्म पछि लागिरहन्छन् । तर, जब व्यक्तिले आफ्नो बहुमूल्य सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन्छन्, त्यसपछि जसरी भए पनि उक्त सम्पत्ति कब्जामा लिने खेल शुरु हुन्छ र ऋणीलाई सडकको बास नगराएसम्म यिनले चैन लिँदैनन् । यस्ता व्यक्तिको नाम हो […]
निवर्तमान सभामुख महरा यसकारण धरौटीमा छुट्न सक्ने
काठमाडौं । संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीमाथी ब ला त्का रको प्रयास गरेको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस जारी छ । बिहिबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले साढे ७ वर्ष कैद मागदाबीसहित महरावि’रुद्ध बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । नेपालको कानूनले महिलासंगको व्यवहारमा अलि कडा रुख अवलम्वन गरेर […]
साथमा पैसा टिक्दैन भने गर्नुहोस् यस्तो उपाय
अमेरिकी बक्सरको मुक्का प्रहारबाट निधन